Mpanamboatra sy mpamatsy bibikely | China Factory Comb Comb
Sisiloy mikotrika alika
Ity borosy fikolokoloana alika ity dia manana nify vy tsy mihodina ary afaka misintona moramora ny akanjo ambanin'ny tany izy io ary hihazakazaka mamakivaky volon'ondry tsy ho voafandrika ary tsy hahazo aina ny biby fiompinao.
Ny paositry ny sisin-dambam-boho alika io dia amboarina amin'ny tendrony boribory mba tsy hanimba na hanakorontana ny hoditry ny biby fiompinao.
Ny fitaovan'ity sisin-dambam-bolo ity dia ny TPR. Malemy be izy io. Manamora sy milamina ny fanamoriana mahazatra.
Vita amin'ny sary nohetezana loaka amin'ny vodin-tànana, azo ahantona ihany koa ny sisin-doha fikolokoloana alika raha ilaina. Mety amin'ny karazana volo lava izy io.
Comb Flea Comb
1.Ny tsimatra amin'ity sisin-parasy saka ity dia amboarina amin'ny tendrony boribory mba tsy hanimba na hanakorontana ny hoditry ny biby fiompinao.
2.Ny fihazonana ergonomika manohitra ny slip an'io bibikely parasy io dia mahatonga ny fametahana matetika sy milamina.
3. Ity sisin-parasy saka ity dia manala moramora ny volo malalaka, ary manala ny kitrokely, fatotra, parasy, mandehandeha ary loto voafandrika. Manadio sy manotra ihany koa palitao mahasalama izy io, mampitombo ny fivezivezen'ny rà ary mamela ny palitao biby malefaka sy mamiratra.
4. Vita amin'ny fanapahana loaka amin'ny tendrony farany, ny tohotra parasy saka dia azo ahantona ihany koa raha ilaina.
Volon'akanjo alika manokana
Fampiasana amboa alika ary fikotranana ho an'ny palitao mahasalama, mampitombo ny fivoaran'ny rà ary mamela ny palitaon'ny biby fiompinao malefaka sy mamiratra. Ny sisinay dia tonga lafatra amin'ny famaranana sy fametahana.
Ny nify vy tsy misy static miaraka amina boribory boribory, tsy handratra ny biby fiompinao izany. Nify tery ho an'ny volo madinidinika manodidina ny mason'ny biby fiompy, sofina, orona, ary tongotra, nify malalaka ho an'ny volo mitomandina eo amin'ny vatana lehibe.
Ny tsorakazo ergonomika miaraka amin'ny velaran-tany tsy misy slip, ny fanosotra ny sisin-damban'ny alika dia misoroka lozam-pifamoivoizana malama anao sy ny biby fiompinao.